Maninona ny Nosy Cayman no toerana mety tantely tantely
Home » Toerana fitsangatsanganana » Maninona ny Nosy Cayman no toerana mety tantely tantely
Oktobra 8, 2018
Ny Karaiba dia tototry ny toerana feno volan-tantely lafo vidy, fa ny Nosy Cayman dia manome boaty be dia be ho an'ny mpivady maro. Ireo Nosy Cayman telo tsara tarehy - Grand Cayman, Little Cayman, ary Cayman Brac - manolotra morontsiraka mbola tsy simba, lafo vidy Villa Cayman, fisitrihana kilasy eran'izao tontolo izao, ary fiadanam-po sy fahanginana be. Mendrika fitsaharana miala sasatra ianao aorian'ny fikarakarana mariazy be loatra, noho izany amin'ity torolàlana ity, dia hizaha ny antony tokony hitondran'ny Nosy Cayman tampoka ny lisitry ny toerana misy tantely misy tantely ianao.
Ny manapa-kevitra ny amin'ny nosy hitsidika ny volan-tanteranao dia tafiditra ao amin'ny sokajy 'olana voalohany'. Raha ny marina anefa dia tena fanapahan-kevitra sarotra izy io, satria samy manana zavatra hafa atolotra ny nosy tsirairay.
Grand Cayman no nosy lehibe indrindra amin'izy telo. Eo no misy ny ankamaroan'ny gadona hotely lafo vidy, ary koa villa mirentirenty be. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Owen Roberts dia eo amin'ny Grand Cayman, tsy lavitra ny renivohitry ny nosy, Georgetown.
Little Cayman no tena manokana sy milamina amin'ireo nosy telo. Raha te-hiverina ianao ary handany fotoana hahafantarana ny vadinao vaovao, Little Cayman dia safidy mety. Maro amin'ireo morontsiraka no tsy misy mponina ary tena mitokana, mba hahafahanao mankafy ny 'fotoana tokana' tsy hatahoran'ny mpanao vakansy hafa tafintohina ao amin'ny akanim-pitiavanao kely. Betsaka ireo tranonkala antsitrika mahatalanjona manodidina an'i Little Cayman, ao anatin'izany ny Rà mandriaka.
Cayman Brac no nosy faharoa lehibe indrindra. Izy io koa dia manana seranam-piaramanidina iraisampirenena: seranam-piaramanidina iraisampirenena Charles Kirkconnell. Ny morontsiraka mikitoantoana ao Cayman Brac dia tena manintona ary azo inoana fa hanintona ireo karazana zavakanto tia mankafy sary sy sary. Azonao atao ny mizaha ny lava-bato, sambo sambo, sy lalana mahafinaritra hafa mandritra ny volan-tanteranao. Tsy tantaram-pitiavana ve izany?
Raha vantany vao nanapa-kevitra ianao hoe iza no nosy tianao hotsidihina, ny dingana manaraka dia ny manapa-kevitra momba ny trano honenanao. Mpanolo-tantely maro no tsy mijery any ankoatry ny trano fandraisam-bahiny malaza, saingy lesoka izany. Ny trano fandraisam-bahiny Resort dia manana tolotra betsaka, fa raha tsy mahay mamandrika ny trano fandraisam-bahiny ianao, dia tsy hanana toerana an-taonina maro.
Safidy tsara ho an'ny hotely fandraisam-bahiny ireo villa mihaja. Raha tokony hizara ny volan-tantelinao amin'ny olon-kafa an-jatony ianao dia afaka mankafy tsiambaratelo. Malalaka ianao ny mahandro ny sakafonao manokana na manofa chef manokana, hanana toerana malalaka kokoa ianao haka aina ary afaka milomano ao amin'ny pisininao manokana ianao. Raha maka ny zanakao amin'ny volan-tanteranao ianao, ny villa any Cayman manankarena dia manome fiarovana izay tsy ananan'ny fialantsasatra.
Hetsika tantely tantely tantaram-pitiavana
Na dia mety te handany fialan-tsasatry ny volan-tantely aza ianao dia mahafinaritra ny manomana hetsika romantika vitsivitsy. Mandehana sambo ary mitsidika ireo nosy hafa. Milomano amin'ny sokatra ary mitsidika an'i Stingray City. Be dia be ny zavatra azo jerena sy atao any amin'ny Nosy Cayman ka ho ringana ianao noho ny safidy.
Honeymoon any amin'ny Nosy Cayman ary afaka manantena ny hanao fahatsiarovana mahatalanjona ianao ary haka sary mahafinaritra, nefa tsy mifampiraharaha amin'ny vahoaka sy ny tsipika.
Fanairana momba ny fizahan-tany any Florida: Rivotra mahery Michael teny an-dalana
Ny firenena Moyen Orient manan-karena dia mifantoka amin'ny indostrian'ny MICE